श्रीमानसंग सुतेकी थिईन्, आधारातमा कसैले शरीर खेलायो, श्रीमान सम्झेर आँखा खोल्दा होसै उड्यो……! – Jagaran Nepal
एजेन्सी। एक व्यक्ति मध्यरातमा एक घरमा छिरे । ती युवक खराब नियतसहित घरभित्र पसेका थिए । भित्र गएर हेर्दा महिला पतिसँग सुतिरहेकी थिइन् । यी युवकले महिलासँग जानुभन्दा पहिले किचनमा गए ।
बच्चा जन्माएपछि महिलाहरूलाई थपिने समस्यामध्ये एक हो, स्ट्रेच मार्क । यद्यपी गर्भावस्थाका महिलामा मात्रै नदेखिएर १५/१६ वर्षका किशोरीमा समेत स्ट्रेच मार्क देखिन्छ । स्ट्रेच मार्कका कारण महिलाहरू क्रप टप वा साडी लगायत भनेजस्ताे लुगा लगाउन पाउँदैनन् । स्ट्रेच मार्क्सले विभिन्न प्रकारको कपडा लगाउने स्वतन्त्रता हटाउँछ ।
स्ट्रेच मार्क विभिन्न कारणले आउने गर्दछ । जस्तै बढ्दो उमेर, गर्भावस्था, मोटोपना, कोर्टिसोन स्किन क्रीमको अधिक प्रयोग यो स्टेरोइड क्रीमको एक प्रकार हो, जुन खुजली र सूजनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यौवन, कोलेजेन को असामान्य उत्पादन आदी कारणले गर्दा हाम्रो शरिरमा स्ट्रेच मार्क आउने गर्दछ । स्ट्रेच मार्क विशेष गरेर पेट, कम्मर, फिला छाती लगायतको भागमा आउने गर्दछ ।
खासगरी पेट, छाती, पाखुराको पछाडिपट्टि, खुट्टाको पछिल्लो भागमा राता र सेता धर्साहरू अर्थात् स्ट्रेच मार्क देखिने गर्छ । स्ट्रेच मार्क जुन अङ्गमा मासु बढी लागेको हुन्छ अर्थात् जुन अङ्गमा मासु जम्मा हुन्छ त्यहाँ बढी देखिने गर्छ । शरीरको वृद्धि विकास अर्थात् मोटाउँदा छाला तत्कन्छ, त्यसपछि स्ट्रेच मार्क देखिन्छ ।
स्ट्रेच मार्क कस्तो अवस्थामा आउँछ ? –शरीरको वृद्धि विकास अर्थात् उमेरभन्दा चाँडै मोटाउँदा स्ट्रेच मार्क आउँछ । –मोटाइसकेपछि चाँडै दुब्लाउँदा स्ट्रेच मार्क आउँछ । —गर्भावस्थामा स्ट्रेच मार्क आउँछ ।
स्ट्रेच मार्कको रोकथाम कसरी गर्ने ?
– स्ट्रेच मार्क रोक्नका लागि नियमित शारीरिक अभ्यास गर्नुपर्छ । दैनिक व्यायाम, योगा अभ्यासले छालाको तन्कने क्षमतालाई विकास गर्छ ।
– स्वस्थकर खानामा बढी जोड दिनुपर्छ । जङ्कफुडहरू जस्तै आइसक्रिम, पिज्जा, बर्गरमा बढी चिल्लो र क्यालोरी हुने भएकाले चाँडै शरीरको वृद्धिविकास हुन्छ ।
– शरीरमा सकेसम्म नियमित मालिस गर्नुपर्छ । छालामा तेल, मोस्चाइजर, लोसन लगाउँदा छालाको तन्कने क्षमता बढ्छ । बडी मसाजले स्ट्रेच मार्क हुनबाट जोगाउँछ । सुख्खा छालाभन्दा तेलिय छालामा तन्कने क्षमता बढी हुन्छ । – शरीरमा स्ट्रेच मार्क रातो खालको आएको खण्डमा मलमहरू लगाएर कम गर्न सकिन्छ । रातो खालको स्ट्रेच मार्क भएकाहरूले ३ देखि ६ महिनासम्म औषधि अर्थात् मलम लगाएर कम अनि निको पार्न सकिन्छ ।
– स्ट्रेच मार्क सेतो भइसकेको अवस्थामा भने मलम अर्थात् क्रिमले निको पार्न सकिँदैन । सेतो भएको स्ट्रेच मार्कलाई विभिन्न प्रविधिहरूको प्रयोगबाट निको पार्न सकिन्छ । – स्ट्रेच मार्कको उपचार छोटो समयमा हुँदैन । यसको उपचारका लागि धैर्यधारण नगरेसम्म सम्भव हुँदैन । उपचारको लागि ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ ।
स्ट्रेच मार्क हटाउन घरेलु उपचारहरू मार्फत् पनि हटाउन सकिन्छ : – घ्यु कुमारी -भिटामिन ई क्याप्सुलहरू एउटा ताजा एलोवेराको पातबाट एक कचौरा जेल निकाल्ने र त्यसमा भिटामिन इको क्याप्सुललाई मिक्स गरिदिने । उक्त जेल स्ट्रेच मार्क देखिएका भागमा लगाउदै विस्तारै मसाज गर्ने । र १० मिनेटपछि मनतातो पानीले धुने । यो प्रकिया दिनको एक वा दुई चोटी गर्ने । स्ट्रेच मार्क विस्तारै हराएर जान्छ ।
– क्यास्टर तेल
कसरी प्रयोग गर्ने ? क्यास्टरको तेल गरम गर्नुहोस् । त्यसपछि हल्का हातले स्ट्रेच मार्कहरू मालिस गर्नुहोस् । सुत्नु अघि हरेक रातमा क्यास्टर तेल लगाउनुहोस् ।